ချစ်သော မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘယ်လဲ ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » ချစ်သော မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘယ်လဲ ?
ချစ်သော မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘယ်လဲ ?
- လူ ဟား
Posted by လူ ဟား on Jun 17, 2013 in Think Different | 15 comments
ခုတလော ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ နုနုထွတ်ထွတ် ဒီမိုကရေစီမြန်မာနိုင်ငံကြီးကို မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်ပြီး မနေနိုင်မထိုင်နိုင်လွန်းလို့ လက်ဆော့ချင်လာတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ…. ဒီရွာကြီးထဲကို သိုသိုသိပ်သိပ်လေးနဲ့ ရောက်နေခဲ့တာ ခုဆို နှစ်နှစ်တောင်ကျော်လာခဲ့ပြီဆိုပေမယ့်… post ရယ်လို့ ယောင်လို့တောင် မတင်ဖူးပါဘူးဗျာ… ခု ဒီ post ကြောင့် အဆဲအဆို ခံရမယ်ဆိုရင်လည်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ခံယူဖို့ အသင့်ရှိတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆပြီးသကာလ…
အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ ကျနော်ဟာ ခရစ်ယာန်စစ်စစ် ဖြစ်ပါကြောင်း မိတ်ဆက်ပါရစေလားဗျာ…
အဲဒီတော့ ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမှုအတိုင်းအ၀ိုင်းက ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို ကျနော်တဦး တည်းရဲ့ဘေးအမြင်နဲ့ တင်ပြဆွေးနွေးကြည့်ချင်တာပါ.. ခုတလော hot ဖြစ်နေတဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆိုတာကြီးနဲ့ ပါတ်သက်လို့ အမျိုးမျိုး ဝေဖန်နေတဲ့ကြားက သမာဓိနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေ အပါအ၀င် ရဟန်းတော် များဟာ အားတက်သရော ဖြစ်နေကြတာဟာ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်တဲ့ လူတစုကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့လား.. ဒါမှမဟုတ် အမှန်တကယ်ပဲ အဲဒီဥပဒေဟာ မျက်မှောက်ကာလမှာ လိုအပ်နေပြီလားဆိုတာတွေ တွေးကြည့်မိလာတယ်….
ဥပဒေကို ကင်ပွန်းတပ်ထားတဲ့ အမည်အရတော့ တော်တော့ကို ကောင်းတဲ့ ဥပဒေပေါ့ဗျာ… ဒါပေမယ့် ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေထဲက တခုလောက် ကျနော် ထုတ်ပြချင်တယ်ဗျာ… အကယ်၍ အဲဒီ မျိုးစောင့်ဥပဒေကိုသာ အတည်ပြုခဲ့ရင် ဘာသာခြားယောက်ျားပျိုတွေအတွက် တရားဝင် အခွင့်အလမ်းပေး သလိုကော မဖြစ်သွားနိုင်ဘူးလား…
ဗုဒ္ဓဘာသာ မိန်းမပျိုလေးတယောက်နဲ့ ဘာသာခြား ယောက်ျားပျိုလေးတယောက် ရည်းစားဖြစ်တယ်ဆိုပါစုိ့… ဒီအတိုင်းအတာထိတော့ ဘယ်သူမှ အဲဒီ မျိုးစောင့်ဥပဒေအရ ပြစ်မှုမမြောက်သေးဘူးနော်… ကဲ.. မိတ်ဆွေတို့ သိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာ… ဒီနေ့ခေတ်ကာလ သားသမီးများ ရည်းစားဘ၀မှာ လက်လေးကိုင်ရုံ၊ ပါးလေးနမ်းရုံနဲ့ တင်းတိမ်မယ်ထင်သလား….. မိန်းကလေးတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အပျိုရည်ကို ပေးအပ်ပစ်လိုက်ဖို့ ၀န်မလေးတဲ့ ရောင်စုံယဉ်ကျေးမှုခေတ်ဗျ…. ပြီးတော့ မိန်းကလေးအများစု တွေးတတ်သေးတယ်.. တဖြေးဖြေးနဲ့ ဖျောင်းဖျယူမယ်ပေါ့လေ… အဲဒါနဲ့ပဲ မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချမှုတွေပါ ကပ်ရက်ပါလာတော့မှာ…. မျှော်လင့်ထားတဲ့ နေ့ရက်ကို ရောက်လာလို့ “ ကဲ.. ရှင် ကျမကို လက်ထပ်ပါတော့.” လို့ ပြောရတော့မယ်…. အဲဒီအချိန်မှာ ယောက်ျားလေးဖက်က ဒီဥပဒေကို ထုတ်သုံးပါပြီတဲ့… “ နင့်ကို ယူဆိုရင်တော့ ခုချက်ချင်း ငါယူလိုက်မယ်…. ဒါပေမယ့်… ငါကတော့ မိရိုးဖလာ ငါ့ဘာသာကို မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူး…အဲဒါကြောင့်.. ထောင်(၁၀)နှစ်ပဲ အကျခံလိုက်မယ်…” လုို့ ပြောလာခဲ့ရင် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာမလေးများ ကိုယ်ချစ်တဲ့ယောက်ျားလေးအပေါ်မှာ အဲလောက်ကြီး ခက်ထန်မာကျောတဲ့ စိတ်မျိုးထားနိုင်ပါ့မလား… ဒါမှမဟုတ် အဲဒီအချိန်ကျမှ ကျမနဲ့ ဟိုဝှာ ဟိုလို ဖြစ်ပြီးပါပြီဆိုပြီး ဘယ်မှာသွားတိုင်လို့ ဘယ်လိုအရေးယူနိုင်တော့မလဲ….
ကျနော်က ဘေးအမြင်နဲ့ တစ်စတစ်မျှင်လေး ထုတ်ပြတာပါ.. စဉ်းစားကြပါအုံးဗျာ….
တကယ်ဖြစ်သင့်တာက တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာမိန်းမပျိုလေးတွေ ယောက်ျားပျိုလေးတွေ ဘာကြောင့် ဘာသာခြားကို လက်ထပ်ကြတာလဲဆိုတဲ့ အရင်းအမြစ်ကို အရင်ရှာသင့်တယ် ထင်တယ်နော်….
ဆိုပါတော့ ဆော်ဒီနိုင်ငံမှာ မိန်းမပျိုလေးဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားပျိုလေးဖြစ်ဖြစ် ဘယ်အချိန်မှာ အိမ်ထောင်ပြုပြုဗျာ သေချာတယ် မူစလင်အချင်းချင်းပဲရကြမှာ…. အဲဒီလိုပဲ အစ္စရေးမှာလည်း ထိုနည်း၎င်းပဲဗျ… ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာသာခြားမှ မရှိတာဗျ… ခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေက ဥပဒေထုတ်ရလောက်အောင်ကို ဖြစ်နေပြီဆိုကတည်းက သေချာနေပြီ လက်ရှိ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဦးရေနဲ့ ဘာသာခြားဦးရေဟာ မတိမ်းမယိမ်း အခြေအနေရောက်နေပြီဆိုတာ…. ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ တဖြေးဖြေး ၀ါးမျိုခံနေရပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ….
ပြီးတော့ မိတ်ဆွေတို့ လေးလေးနက်နက် သတိချပ်သင့်တာက မြန်မာနိုင်ငံဟာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံး ခြေကုတ်စခန်းဆိုတာကို ဘယ်တော့မှ မေ့မထားကျပါနဲ့….
သမိုင်းကို အစွဲမပါပဲ ပြန်ငှဲ့ကြည့်ကြပါ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ တိုးပွားလာတာထက် လျှော့ပါးသွားတာကို မိတ်ဆွေတို့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရမှာပါ…
ကဲ… အခု ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ကျနော်တို့ ခရစ်ယာန် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတို့ရဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦးဖွဲ့စည်းပုံကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြရအောင်လားဗျာ… နှိုင်းယှဉ်ကြည့် မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားဓမ္မနဲ့ ခရစ်ယာန်ရဲ့ သမ္မာတရားကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖို့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိချပ်စေချင်ပါတယ်…
ဒီလိုဗျာ.. မိတ်ဆွေတို့သိနှင့်ထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာမိဘနှစ်ပါးက မွေးဖွားလာတဲ့ သားသမီးများဟာ အလိုလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်သွားကြသလို ခရစ်ယာန်တွေမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ မဟုတ်လားခင်ဗျာ… ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်လာကြတဲ့ သားသမီးများကို ခဏအသာ ထားလို့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာကြတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ သားသမီးများအကြောင်းကို အကြမ်းဖျင်းလေး ကျနော်ပြောပြပါရစေခင်ဗျာ….ချစ်မိတ်ဆွေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်…
ခရစ်ယာန် သားသမီးများဟာ အသက်သုံးနှစ်လောက်ကစလို့ Sunday School ဆိုတဲ့ ဘုရားကျောင်းက ကျောင်းလေးကို အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း မိဘများက တာဝန်ယူ ပို့ဆောင်ပေးကြတယ်… အဲဒီ Sunday School မှာ မူကြို၊ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အကြီးတန်းဆိုပြီး အဆင့်ဆင့်ရှိတာကြောင့် သားသမီးများဟာ အသက်အရွယ် ၁၆၊ ၁၇ နှစ်ထိ မိဘများက ကြပ်မတ်ပြီး မပျက်မကွက် တက်စေပါတယ်… Sunday ရောက်လို့ Sunday School မသွားခဲ့ရင် အမေ့ရဲ့ ဒုတ်စာလား အဖေကဆော်မလားဆိုတာ တွေးကြောက်နေရပြီသာမှတ်ပေတော့.. အဲဒီလောက် မတင်းကြပ်တဲ့ မိဘတွေလည်းရှိပါတယ်… ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့် ၁၀နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုတော့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ကိုင်တွယ်လေ့ရှိတယ်ဗျ… အဲဒီလို မူကြိုကနေ အကြီးတန်းအထိ အစီအစဉ်အတိုင်း တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် အတန်းတက်ရုံမဟုတ်ပါဘူး… နှစ်စဉ်ကျင်းမလေ့ရှိတဲ့ မိခင်များနေ့၊ ဖခင်များနေ့၊ ခရစ္စမတ်နဲ့ အခြားသောပွဲနေ့တွေမှာ ကဏ္ဍအလိုက် အတန်းတိုင်းဟာ သီးခြားအစီအစဉ်တွေကို ဦးဆောင်ရပါတယ်…
ကျနော်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ခရစ်ယာန်ကလေးတွေဟာ အကြမ်းအားဖြင့် အပတ်တိုင်း တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ သမ္မာတရားနဲ့ နီးစပ်တဲ့အပြင် ခရစ်ယာန်မိသားစုချင်းချင်း အမြဲတမ်း မိဿဟာယဖွဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံနေကြရတယ်ဆိုတာကို ပြောပြချင်တာပါ… ဆိုတော့ ၁၄၊ ၁၅ နှစ်လောက် နှစ်ရှည်လများ ရိုက်သွင်းခံလာရတဲ့ ဒီသမ္မာတရား ကျနော်တို့ နှလုံးသားမှာ သံမှိုစွဲသလို အမြစ်တွယ်နေမယ်ဆိုတာ ယုံမှားသံသယ ရှိမယ်လို့ မထင်ပါဘူးဗျာ….
ချွင်းချက်အနေနဲ့ တချို့သော ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘုရားကျောင်းနဲ့ဝေးရာကို ထွက်သွားတတ်ကြပါတယ်… ဒါပေမယ့် အသက်ရှင်နေသရွေ့ အချိန်တန်တဲ့ တနေ့မှာ သူတို့ဟာ ဒီမိသားစု ရင်ခွင်ထဲကို ပြန်ရောက်လာတတ်ကြတာချည်းပါပဲ…
ချစ်မိတ်ဆွေ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများလည်း နားဆင်ဖူးမယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့ အဆိုတော် ဗဒင်ရဲ့ သီချင်း စာသားလေးတချို့ကို ဒီနေရာမှာ အနည်းငယ် မျှဝေပါရစေလားခင်ဗျာ…
“ ဘုရားကျောင်းထဲ မင်းလေးမရောက်တာ အတော်ကြာပြီ
ပြန်ပြီပြောဖြစ်တယ်ဆို… မင်းသတင်း x x x x x xxx x
မင်းဆိုးလို့ ၀ရင် မင်း မိုက်လို့ ၀ရင် ဘုရားကျောင်းဖက် မင်းလေးလှည့်လာနော်…
သိုးမဲဟောင်းကြီးတွေ ပြေးထွက်လာပြီး မင်းကို ကြိုနေမယ်……”
ကျနော်တို့ဆီမှာ အမှန်တကယ် အဲဒီအတိုင်းပါပဲ….
အပေါ်က အကြောင်းအရာတွေဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ဥယျာဉ်ခြံကို ကာကွယ်တဲ့ အကြမ်းဖျင်း နည်းလမ်းပါပဲခင်ဗျာ…(ဥပဒေထုတ်ဖို့ မလိုပါဘူးခင်ဗျာ)
ကျနော်တို့တွေဟာ ဒီလောက်နဲ့ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်နေကြတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ… ကျနော်တို့ ဘုရားကျောင်းလို့ခေါ်တဲ့ အသင်းတော်တပါးစီတိုင်းမှာ ဌာနပေါင်းများစွာရှိကြပါတယ်.. အဲဒီထဲကမှ ဧ၀ံဂေလိဌာန ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းလေးလည်း ရှိပါတယ်… နားလည်လွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဧ၀ံဂေလိဌာန ဆိုတာ သာသနာပြုတဲ့ဌာနပေါ့ဗျာ… သင်းအုပ်ဆရာ(မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဆိုပါတော့) ဟာ ဘုရားကျောင်းမှာ ပင်တိုင်ရှိနေပြီး အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေ ၀တ်ပြုအစည်းဝေးကို ဦးဆောင်သည်သာမက အခြားသော အသင်းသူအသင်းသားများရဲ့ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး နဲ့ အခြားသော ထွေရာလေးပါးများကို တာဝန်ယူ ခွဲခန့်မှတ်သားပါတယ်.. ဆိုလိုတာက ကိုယ့်ဥယျာဉ်လေးကို လုံခြုံအောင် အကွယ်အကာပေးနေတဲ့ သဘောပေါ့ခင်ဗျာ…
တချိန်တည်းမှာပဲ ဧ၀ံဂေလိဌာနဟာ သွက်လက်ဖျတ်လတ်တဲ့ လူငယ်ဓမ္မဆရာတွေ၊ နိုးကြားတက်ကြွတဲ့ လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေ နဲ့ လူငယ်တွေ စုပေါင်းပြီး မိမိတို့ ဥယျာဉ်ခြံဝန်းပြင်ဖက်ကို ထွက်လို့ ဧ၀ံဂေလိတရား(သာသနာပြုတဲ့တရား)ကို ဟောပြောသက်သေခံကြပါတယ်….အဓိကအားဖြင့် အတီးအမှုတ်တွေပါမယ်… ဇာတ်လမ်းပြဇာတ်တွေ အကတွေနဲ့တကွ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့ လူငယ်တွေ ပါဝင်ကြပါတယ်…..
ကျနော်တို့ ဧ၀ံဂေလိဌာနရဲ့ အဓိက Target တွေကတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘာသာခြားတွေကြားထဲမှာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေထိုင်နေကြရတဲ့ လူနည်းစု ခရစ်ယာန်မိသားစုလေးတွေကို အပတ်စဉ်သွားရောက် အားပေးခြင်း မေတ္တာပြခြင်း လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကို ပေးကမ်းဝေမျှခြင်း စတာတွေ လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်… သဘောကတော့ လူနည်းစုမို့လို့ ပတ်ဝန်းကျင်လူများစုရဲ့ လွမ်းမိုးဝါးမျိုမှုကို မခံရအောင် လို့ပေါ့ဗျာ….
အဲဒါပြီးမှ အခြားသော ဘာသာခြားတွေဆီ ဆက်လက်ပြီး ဧ၀ံဂေလိ သာသနာပြုကြပါတယ်…. တောင်တန်းဒေသ ကျေးလက်တောရွာတွေမှာ သာသနာပြုပုံအနည်းငယ် ဖေါ်ပြလိုပါတယ်.. ကျနော်တို့တွေ ဟာ အဲဒီဘာသာခြားကျေးလက်တောရွာ(ဥပမာ.. နတ်စားရွာလိုမျိုးဆိုပါတော့)တွေကိုသွားတယ်.. ကျနော်တို့ရဲ့ သာသနာတရားတွေကို အရင်မဟောပြောပါဘူး… လူငယ်တွေ နှစ်ယောက်တတွဲ သုံးယောက်တတွဲ စသဖြင့် အစုခွဲပြီး အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကို သွားပြီး ကူညီလုပ်အားပေးပါတယ်… လယ်ထွန်ချိန် လယ်ထဲကူဆင်း… ကောက်ရိတ်ချိန်ကောင်လှိုင်းတွေ ၀ိုင်းကူရိတ်ပေး.. ထင်းခွေရင်လည်း ၀ိုင်းကူ.. အဲလိုလုပ်တယ်ဗျ… တနေ့တာပြီးလို့ ညနေစောင်းရင်တော့ ကျနော်တို့ လူငယ်တွေ ပြန်စုပြီး အတီးအမှုတ် အဆိုအကပြဇာတ်တွေနဲ့ သူတို့တွေကို ဖျော်ဖြေပါတယ်.. ကြားထဲမှာတော့ ဧ၀ံဂေလိ တရား အနည်းငယ်စီထည့်ဟောကြတာပေါ့ဗျာ….
Post တော်တော်ရှည်နေပြီမို့လို့ ဒီလောက်ပဲ အကြမ်းဖျင်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ…အထက်ပါ အကြောင်းအရာများကတော့ ကျနော်တို့ ဥယျာဉ်ခြံ စည်ပင်တိုးတက်ပွားများဖို့အကြောင်းများထဲက တစိတ်တဒေသကို တင်ပြခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ…
ချစ်မိတ်ဆွေ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်အပေါင်းတို့ အဆွေတို့ဘာသာရဲ့ လူမှုဝန်းကျင်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း မေတ္တာနဲ့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
လူဟား (17 June 2013)
About လူ ဟား
လူ ဟား has written2post in this Website..
View all posts by လူ ဟား →
မြန်မာပြည်မှာ.. ဦးနုလုပ်ခဲ့တာမျိုးတွေကို.. ပုံစံတမျိုးအသက်သွင်းရင်းနဲ့ပဲ.. ပြည်ထောင်စုထိခိုက်ပြိုကွဲမှာပါပဲ..
မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟာ.. ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကို.. ကိုယ်စားမပြုပါဘူးလို့…။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ..ချိုင်းနားပြည်ကြီးချမ်းသာလာတာနဲ့အမျှ.. ကွန်မြူနစ်အခြေခံတွေ.. လျှော့ကျလာတာနဲ့အမျှ.. တိုးနေပါတယ်..
ဂျပန်မှာလည်း.. ခိုင်မာတဲ့.. ဇမ်ဗုဒ္ဓဘာသာစနစ်အတိအကျနဲ့ရှိပါတယ်..။
မြန်မာပြည်ဖြစ်ပုံက.. ဟိုးအရင်.. ဂေါတမဗုဒ္ဓလွန်ပြီးနောက်.. ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားရာဒေသတွေမှာ.. အချိန်ကာလကြာတာနဲ့အမျှ.. ဟိန္ဒူဘာသာသာသနာကမြိုသွားသလို.. သမိုင်းဘီးအထပ်ထပ်လည်နေတာပါ…
မြန်မာဆိုတာက… (အိမ်နီးနားချင်းတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီး)…အိန္ဒိယနဲ့ယှဉ်ရင်.. လူဦးရေ သေးသေးလေးကိုး…
ပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်…
အဓိကကတော့ သာသနာနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း၊ သာသနာကို ယုံကြည်သက်ဝင်ခြင်း တို့နဲ့ ဆိုင်မယ် ထင်ပါတယ်… ဘာသာပြောင်းရခြင်းဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ဘာသာတရားက ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတယ်..ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အဓိက လို့ မခံယူထားကြလို့ လို့ ထင်ပါတယ်… ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ် ငါ့အတွက် ဘာမှမထူးဘူးလို့ ထင်ကြတာက တစ်ချက်၊ ငါ ဒီလိုလုပ်လိုက်လုိ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးလို့ ထင်နေတာ တစ်ချက် ကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…
မှန်ပါတယ်… ခရစ်ယာန်က ငယ်ငယ်ကတည်းက ဓမ္မတရားတော်တွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တာပါ… ဗုဒ္ဓဘာသာမှာက ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းဆို သိပ်ပျင်းစရာကောင်းတာ မို့လား… အရင်ကဆို ဘုန်းကြီးတွေကလည်း သံနေသံထားတွေနဲ့ဟော..ပါဠိလိုတွေပြော..တရားပွဲဆိုရင်..နေရာမှာတင် အိပ်ချင်တာ.. တရားဟောနည်းပုံစံပြောင်းလာတာတွေက နှစ်သိပ်မကြာသေးပါဘူး.. နောက်ပြီးတော့ တတိယအရွယ်မှာ တရားရှာဆိုတဲ့အတိုင်း ငယ်သေးရင် ဘာသာရေးဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ မလိုသေးဘူးလို့ ထင်နေကြတာကိုး… တကယ်က အဓိက ရှာသင့်တာတွေကိုဟောသွားတာပါ… ဒါကိုလူတွေက အမှတ်မှားနေတော့ ခက်ရော…
နောက်ပြီး ကျပ်တည်းလာတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ပိုက်ဆံက ပိုအရေးကြီးလာတယ်..ဒီကြားထဲ ဘာသာရေးကလည်း ဝေးတော့.. ဘာမသိ ညာမသိတွေနဲ့ သူများဘာသာတွေဖြစ်၊ မွေးလာတဲ့ကလေးတွေလည်း ဘာသာခြားတွေဖြစ်… ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့ရသလောက်ဆို ဘာသာပြောင်းသွားတဲ့ သူတွေက ဘာသာရေးပိုပြင်းထန်ကြသလိုပဲ… ဘယ်လိုတရားတွေများ နာပြီး အဲ့လောက် ယုံကြည်သွားကြလဲ သိချင်သား…
နောက်တစ်ခုက ဘာသာရေး နဲ့ လူမျိုးရေး မရောချင်တာပါ.. ပြောလက်စနဲ့ ပြောလိုက်ပါဦးမယ်… (ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကိုတော့ အားနာပါတယ်..) ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာပြဌာန်းခြင်း အမှတ်တရနေ့ အဖြစ် ပြန်လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်.. (တောင်းဆိုတာ မဟုတ်ဘူးနော်..) တစ်ချိန်တုန်းက နိုင်ငံတော်က သာသနာကို ဒီလိုချီးမြှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို သိစေချင်တာရယ်… နိုင်ငံသားတွေက ကိုယ့်ဘာသာကို တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကို သိစေချင်တာရယ်ကြောင့် အဲ့ဒိနေ့မှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ လုပ်ကြမယ်… ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ဘူး..မနှိပ်ကွပ်ဘူး… ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကိုယ့်ဘာသာ သာသနာရဲ့ အဆုံးအမနဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မှာ..ကိုယ်တွေသာ တကယ်ညီရင် သူများတွေ ဘယ်လောက်သွေးထိုးထိုး မပြိုကွဲပါဘူးလို့..
အဲလိုသာဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းမြောက်ကြောင်းပါဗျာ… ခုဖြစ်နေတာက ဗုဒ္ဓဘာသာ အချင်းချင်းပြောနေတိုက်ခိုက်နေလိုက်ကြတာများ online မှာမြင်မကောင်းတော့လို့ပါဗျာ.. တကယ်ဆို ကျနော်တို့ အနေနဲ့ အနေသာကြီးပါခင်ဗျာ….
သင်းအုပ်​ဆရာလို လူဝတ်​ဗုဒ္ဓတရား​ဟောဆရာ​တွေ များများ​ပေါ်ထွန်း​စေချင်​တယ်​။ဒါမှ ​အ​နေအထိုင်
ု​ အပြုအမူ သက်​​တောင့်​သက်​သာဖြစ်​ပြီ အပြန်​အလှန်​​ဆွေး​နွေးရဲပါမယ်​။ဘုန်းကြီးတရား​ဟော​တော့
နားမလည်​ရင်​ ပြန်​လှန်​မ​ဆွေး​နွေးရဲ ၊ဒီ​တော့တရားအ​ကြောင်း​ကောင်း​ကောင်းမသိ၊ ​နောက်​မသွား​
ချင်​​တော့ပါ။ဒီလိုနဲ့ ဘာသာ​ရေးမှာ ​လျော့ရဲလာတာပါ။ယဉ်​​ကျေးလိမ္မာသင်​တန်း​တွေ များများဖွင့်​ရမယ်​။
ခိုင်ဇာလေး တလောက ကော်ပီရေးတင်တဲ့ စင်ကာပူက အိမ်ထောင်ပြုခွင့် စီစစ်တဲ့ ဥပဒေပုံစံမျိုး သဘောကျသဗျာ.. ဘာသာမတူသူတွေယူရင် သူ့ဘာသာ ကိုယ့်ဘာသာ အကြေအလည် ဆွေးနွေးပြီးမှ ဘာသာပြောင် လက်ထပ်ခွင့်ပြုတာ… ကြေးမုံဂျီးကို ရလို့ကတော့ ဗမာဇာတ်သွင်းပစ်မကွ… ဝက်အချိုချက် စားခွင့်လုံးဝမပြု.. စာချင်လျင် ဝက်ပုန်းရည်ဂျီး၊ ဝက်အသားနီချက်စား…
ကိုယ်တိုင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီး မိရိုးဖလာထက် နည်းနည်းလေးပိုတဲ့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်မှတ်ပါတယ်။
လူဟားပြောတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ စည်းလုံးမှု၊ ဘာသာသွေး နွေးထွေးမှုလေးတွေကို သိရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ အတုယူစရာ ကောင်းတာလေးတွေကို သိရလို့ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ထင်မြင်တာကို ပြောရမယ်ဆိုရင်….
လူဟား ဟာလည်း ခရစ်ယာန်ဘာသာအပေါ်မှာ သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ (မိရိုးဖလာထက်ပိုတဲ့) ဘာသာရဲ့အဆုံးအမကို လိုက်နာတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ (မိရိုးဖလာထက်ပိုတဲ့) ဘာသာရဲ့ အဆုံးအမကို လိုက်နာတဲ့ သူတွေဟာလည်း လူဟားတို့လိုပဲ ယဉ်ကျေးပျူငှာကြပါတယ်။
အနည်းဆုံး ကြမ်းတမ်းရိုင်းပျတဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုံးတွေ မသုံးကြပါဘူး။
ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ရင့်သီးတဲ့ မာန်မာနတွေပြည့်ပြီး ခက်ထန်တဲ့ အပြောအဆို အပြုအမူတွေ ပြောဆိုပြုမူနေကြသူတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုသူတွေဟာ အမည်ခံ၊ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ။
သူတို့ရဲ့ နှလုံးသားမှာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမတွေ မတည်ကြလေတော့ ပြောဆိုပြုမူမှုတွေမှာလည်း တရားလက်လွတ် ကြမ်းတမ်းခက်ထန်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲလိုလူတွေကို ကြည့်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးတွေချည်းပါပဲလားလို့ အထင်မှားမှာ စိုးမိပါတယ်။ :eee:
ဘယ်ဘာသာဝင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသာတူအိမ်ထောင်ပြုခြင်းကတော့ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့ ယေဘူယျ ဆိုလို့ရပါတယ်၊ ဒါပေသည့် အိမ်ထောင်တစ်ခုအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်မှု့ရှိဖို့က ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အိမ်ထောင်ပြုကြတယ်ဆိုတာ အဲဒီနှစ်ဦးဘဲ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ တစ်သက်လုံးနေထိုင်သွားကြတဲ့ အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် နှစ်ဘက်ဆွေမျိုးနဲ့ အသိုင်းအ၀န်းနှစ်ခုလည်း မခေါ်ချင်ရင်နေ မတော်ချင်မရသလိုမျိုး ကူလူးဆက်ဆံသွားကြရလိမ့်မယ် ဆိုတာကိုတော့ သိကြစေချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ချင့်ချိန်စဉ်စားပါလို့ ဘဲပြောချင်တာပါ။
တော် တော် တန် ဖိုး ရှိ တဲ့ ပိုစ့် လေး ပါ။ ကျမ တို့ ရဲ့ မိရိုး ဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င် တချို့ က ကိုယ့် ရဲ့ အား နည်း ချက်ကို မမြင် ပဲ သူ များ ကို ပဲ လက် ညှိုး ထိုး ဖို့ စဉ်းစား နေကြ တယ်။ တခြား ဘာ သာ ၀င် တွေ ကိုယ့် ဘာ သာ ကို ပြန့် ပွား အောင် လုပ်တာ ၊ ကာကွယ် တာ တွေ ကို အတု မယူ ပဲ ( ဥ ပမာ ကို လူဟား တို့ ခရစ် ယာန် တွေ လုပ် သ လို ) ၊ သူ တို့ ပြော တဲ့ အစွန်း ရောက် တဲ့ ဘာသာ က လူ တွေ လုပ်တဲ့ အတိုင်း လိုက် လုပ် ချင်နေကြတယ်။ ပြော ပြန်ရင် လည်း ဘာသာ တူချင်း ကို ပဲ အမြင် မတူ ကိုယ့် ရန်သူ လို့ သတ် မှတ် ချင် ကြသေး တယ်။ တခါ တရံ များ ကိုယ့် ကို လူ မသိဘူး ဆို ပြီး မိုက်မိုက်ရိုင်း ရိုင်း ဆဲ ဆို နေကြ တာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င် တစ်ယောက် အနေ နဲ့ အတော် ရှက် မိ ပါတယ်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ဗုဒ္ဒဘာသာအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်ဆိုတာ ခင် ထောက်ခံပါတယ် ကလေးဘ၀ကျောင်းတက်ခဲ့စဉ်က ခရစ်ယာန်အိမ်နဲ့ တစ်အိမ်ခြား တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဘုရားကျောင်းသွားတယ်
အိမ်ကလဲ မသွားနဲ့လို့မပြောဘူး ဘုရားကျောင်းထဲအေးမျှတယ် တခြားသွားလယ်ရင် စိတ်မချရဘူး ပြီးတော့ နေပူတယ် ဆိုင်ကယ်ကားတိုက်မှာပူရတယ် ဘုရားကျောင်းထဲသွားတာဆိုတော့ အေးလဲအေးတယ် ဆရာ၊ဆရာမတွေနဲ့အတူပြန်လာတာဆိုတော့ မိဘတွေကစိတ်ချတယ် စနေနေ့ဆိုရင်ဘုရားကျောင်းထဲသန့်ရှင်းရေးသွားလုပ်တယ် တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုဘုရားကျောင်းတက်မယ် အရမ်းကိုပျော်နေတာပဲ ခရစ်စမတ်ရောက်ရင်မုန့်စားရမယ် လက်ဆောင်တွေရတယ် အဆင်မပြေလို့အားငယ်ရင် ဘုရားကျောင်ကသူငယ်ချင်းတွေကအားပေးတယ် ဘာကူညီရမလဲအမြဲကူညီကြတယ် ဘာသာခြားက ရှေ့ဆောင်လမ်းပြကောင်းတယ် အချင်းချင်းကူညီပေးကြတယ် ကိုယ့်ဘာသာမကောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ခြေမမကောင်းခြေမပါ ဒါပေမဲ့လွန်လွန်းလို့ပါ ခင့် ဘ၀တစ်စိတ်တစ်ဒေသလေးပြောပြမယ် ခင့်ယောက္ခမကသီလရှင် သူ့သားနဲ့အိမ်ထောင်ကျတယ် မန်းလေးကျောက်ဝိုင်းနားမှာအိမ်ငှါးနေတယ် တစ်နှစ်ပြည့်ခါနီးကျတော့ ယောက္ခမက အိမ်လခတစ်ဝက်တောင်းတယ် ပေးစရာမလိုဘူးပြောတော့ အိမ်ပေါ်ကမောင်းချတယ် ငါ့သားနဲ့မပေါင်းနဲ့ကွဲပေးပါတဲ့ ပြီးတော့ ဘာမှမယူပဲအိမ်ကဆင်းပေးပါလို့ပြောတော့ မိဘကအစားမရဘူး မယားက အစားရတယ်ဆိုပြီးကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ အိမ်ပေါ်ကဆင်းပေးတယ် ဘာမှတော့မယူခဲ့ဘူး ချက်ချင်းထုတ်မရတဲ့ ရုံးထဲကရှယ်ယာသုံးသိန်း နဲ့ (47) ဖုန်းတစ်လုံးပါခဲ့တယ် ယောက္ခမ သီလရှင်က ဆဲဆိုပြီးအတင်းတောင်းတယ် နောက်ဖုန်းတစ်လုံးကို သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ကျောင်းကဘုန်းကြီးကဆဲဆိုပြီးတောင်းတယ် အဲ့ဒါဖြစ်သင့်လား ကိုယ့်ဘာသာကိုရှက်မိပါတယ် ၀မ်းနည်းလွန်းလို့အေးမျှပြီးအားပေးကူညီတတ်တဲ့ ဘုရားကျောင်းကိုပဲရှာနေမိတယ် ကို့မြို့မှာဆိုရင်တော့ ဘုရားကျောင်းရောက်နေပြီပေါ့ မန်းမှာဆိုတော့ မသွားတတ်တော့ ငယ်ငယ်ကသွားခဲ့ကြတဲ့ ကသာမြို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်းက ဘုရားကျောင်းလေးပဲလွမ်းမိပါတယ်
သူတစ်ပါးကိုတိုက်ခိုက်ချင်းမရှိပါ အမှန်အကန်ကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် လိမ်လည်ပြောဆိုသည်ဟုယူဆပါက
လေးစားပါ တယ် ကိုလူဟားရေ……….
နေခင်ရဲ့ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကို ဖတ်ပြီး စဉ်းစားမိတာလေး ပြောချင်တယ်။
ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာမှာ အိမ်လခ တစ်ဝက်တောင်းတာက အဓိက လို့ မြင်မိတယ်။
သားသမီးအနေနဲ့ အရွယ်ရောက်လာရင် မိဘကို ပြုစုလုပ်ကျွေးရမယ့် တာဝန်ရှိတာမို့ အိမ်လခတစ်ဝက်မက အပြည့်ပေးပြီး မိခင်ကို အခမဲ့ နေစေဖို့ကောင်းတယ်လို့ မြင်မိတယ်။
(ဘာသာစုံ၊ နိုင်ငံစုံ အမြင်တွေနဲ့ ကွာချင်ကွာနိုင်ပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ရော၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေအရပါ မိဘကို သားသမီးက တာဝန်ယူ စောင့်ရှောက်ရမှာပါ။)
ယောက္ခမ မယ်သီလရင်က ဆဲဆိုတယ်ဆိုတာက တစ်ပိုင်း ဖြစ်သွားပြီ။
မယ်သီလရင် ဆိုတာလည်း ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုမရှိရင် ပုထုဇဉ်ပဲမို့ သာမန်လူလိုပဲ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန်မာနတွေ မကင်းနိုင်ပါဘူး။
နောက်ဆုံးပြောရရင် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဟောထားတဲ့ သူတော်ကောင်းဆိုတာ သူတော်မှ ကိုယ်ကောင်းတာ မဟုတ်ပဲ၊ သူတော်တော် မတော်တော် ကိုယ်က ကောင်းအောင် နေမှ သူတော်ကောင်းလို့ ဆိုပါတယ်။
နေခင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်ပီပီ ကိုယ့်စိတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာန်မာနတွေကို ပါးသွားအောင် ဘုရားအဆုံးအမ တရားတော်တွေကို နာကြည့်ပါလား။
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် အရှင် နန္ဒမာလာဘိဝံသတရားတော်တွေဆိုရင် အတော်လေးကို စုံလင်ပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဟောကြားထားတာတွေမို့ နာကြည့်ရင် လောကီတင်မက လောကုတ္တရာအကျိုးပါ များနိုင်ပါတယ်။
သီလရှင်ဆိုတာ.. ဘုရားကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့.. သံဃာဂိုဏ်းဝင်မဟုတ်ပါဘူး..
ရဟန်းယောက်ျား(ဘိက္ခူနီ)နဲ့..တတန်းထဲရှိရတာက.. ဘိက္ခူနီမ(ရဟန်းမ) ပါ…
မြန်မာပြည်မှာ.. အမျိုးသားတွေကြီးစိုးတော့.. “ရဟန်းမ”လုပ်ခွင့်မပြုပါဘူး..
မြန်မာပြည်မှာ.. ရဟန်းမ မရှိပါဘူး..။ ရှိရင်ဖမ်းထောင်ချပါတယ်...။
သီလရှင်ဆိုတာ..(အများအားဖြင့်) သီလအရောင်ဆိုးပြထားတဲ့.. လူပဲဖြစ်ပါကြောင်း..။
မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာထဲ.. မြန်မာတွေရဲ့… အတွေးအခေါ်အယူအဆချိုးပြောင်းသွားစေတဲ့.. စကားကြီးနောက်တခွန်း တွေ့မိပြန်တယ်..
“ဂီတ..အနုပညာလုပ်သူ.. ငရဲကျ/သွားရမယ်” ဆိုတဲ့.. အယူအဆပါပဲ..
ကောင်းရာမွန်ရာကိုလမ်းပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမ….
မိခင်ကို အိမ်လခတောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ယောက္ခမကချမ်းသာတယ် သီလရှင်တာဝတ်ပြီးသားတွေနဲ့တူတူအိမ်မှာနေတယ် အားလုံးချမ်းသာကြတယ် ယောက္ခမရဲ့သမီးအကြီးက
ကျောက်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ကို့အိမ်နဲ့ ကို့စီးပွားဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီး အိမ်လခ ငှါးပြီးထားပေးတယ် တစ်နှစ်ပြည့်တော့ ခင့်အမျိုးသား၊ အမျိုးသားရဲ့ မိခင် ခင့်ယောက္ခမ က အိမ်လခ တောင်းတာကိုပြောတာပါ ချွေးမ မှာ တောင်းစရာမလိုဘူးလေ အားလုံးကအိမ်ထောင်ဦးစီးတာဝန် ယောင်္ကျားတာဝန်ပါ ခင်က သီလရှင်ရဲ့ချွေးမပါ သားအမိနှစ်ယောက် ၀ိုင်းပြီးရိုက်နှက် အိမ်လခတောင်း မပေးတော့ အိမ်ပေါ်ကမောင်းချတာပါ မန်းလေး၊ကျောက်ဝိုင်းနားက
၀ိသုဒ္ဒါရုံကျောင်းဘေးနားမှာနေသွားတာပါ မိဘကိုအိမ်လခတောင်းတာဆိုပြီး အထင်လွဲမှာစိုးလို့ ထပ်မံဖော်ပြပေးတာပါ (26.4.2013) နေ့ကတင်တဲ့ လမ်းကြုံရင်ပြောပေးပါ ပို့မှာ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပေးပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အတုယူစရာ ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေ ပြောပေးလို့ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။
ကျမ အပါအ၀င် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ကိုယ့်ဘာသာဝင်တွေပေါ် တာဝန်မကျေမိတာ အများကြီးပဲ။
ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီး ကိုလူဟားတို့ အပတ်စဉ် ဘုရားကျောင်းလာချင်အောင် သင်းအုပ်ဆရာ စီစဉ်သလို
ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က ချို့တဲ့သူတွေ ဥပုသ်နေ့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းလာပြီး တစ်ထိုင်ဥပုသ်ဖြစ်စေ ယူချင်အောင်
ဆန်နဲ့ အနှစ်သာရပါတဲ့ တရားစာအုပ် လှူတဲ့ အစီအစဉ်လေး ကြိုးစားကြည့်ပါအုံးမယ်။
မယ်သီလ ဖြစ်ရတဲ့ သီလရှင်တွေ များသလို
တကယ့်ကို သာသနာကို ချစ်လွန်းလို့ ၀တ်တဲ့ သီလရှင် ပညာတတ်ဘွဲ့ရ မိဘ ချမ်းသာတွေလည်းရှိပါတယ်။
(အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသူလေးတွေ ပိုသိသာပါတယ်)
ဘိက္ခူနီမ ဆိုပြီး စစ်ဆေးကြရာကနေ အမှုအခင်းဖြစ်တာ ရိုးတိုးရိပ်တိတ်ကြားဖူးပါတယ်။
သေချာမသိတဲ့ ကိစ္စမို့ မပြောချင်ပါ။
ဒါပေမယ့် ဘိက္ခူနီ ဖြစ်စေ ၊သီလရှင်ဖြစ်စေ
နာမည်က အဓိက မဟုတ်ပဲ အကျင့်သာ အဓိက လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
အ၀တ်ပဲဝတ်ပြီး အကျင့်မရှိရင် ကတုံးသာ အဖတ်တင်မှာပါ။
(ကိုယ့်သာသနာတွင်းမှာ သာသနာ ညှိုးနွမ်းစေမယ့် အယောင်ဆောင်တွေ များလွန်းနေတာလည်း တော်တော့်ကို
ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတွေမှာ ခရစ်ယာန် သင်းအုပ်ဆရာလို လူတွေနဲ့ သိပ်ပြီးရောနှောလို့ မရတဲ့ ၀ိနည်းတွေရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူတွေကို စည်းရုံးတဲ့ အပိုင်းမှာ လူ ဥပါသကာ ဥပါသိကာမတွေရဲ့ တာဝန် အများကြီး လိုပါတယ်။